युवा सँघका उपाध्यक्ष झाले दिए पदबाट राजीनामा
उनले अवसरवादी र सामन्तीहरू विरूद्ध निर्णायक संघर्ष जारी रहने पनि राजीनामामा जनाएका छन् ।
२०७८ असोज १२ मंगलबार
दिउसो १२:०५ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । ‘जता खीर उतै भीर’ भन्दै नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष संजीव कुमार सुरज झाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
पार्टीलाई विधि विधान विपरित संचालन गर्दा आन्दोलन नै संकटमा परेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष झाले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष झाले माओवादीबाट आएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुको साट्टा पाखा लगाउने काम भएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तराई मधेश मा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्व को सरकार ले गरेको एतीहासिक बिकास को काम , मधेश आन्दोलन को क्रममा लागेका मुद्दा हरु फिर्ता र नागरीकता सम्ब न्थी ल्याईएको अध्यादेश को कारण झन नेकपा (एमाले) मधेश मा लोकप्रीय भए आज एमाले प्रती सबै भन्दा बढी आकर्षण भएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन ।
प्रदेश नम्बर २ का जनताहरु केपी ओलीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको भन्दै केही साम्मन्ती प्रबिर्ती र जमिन्दारी प्रथाले प्रदेश २ मा पार्टी चलाउन खोज्नेसिङो पार्टी नै दाईजोमा लिएर आएको सम्पती ठान्ने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।
पार्टीको बिधी प्रकृया र बिधानलाई लत्याउदै मनपरी तन्त बाट पार्टी चलाउन थालेपछी अप्ठ्यारो र पिडा महसुस भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले पदबाट राजीनामा दिएपनि पार्टीबाट भने राजीनामा नदिएको बताएका छन् ।
सिरहाका यी वडाध्यक्ष लागुऔषध सहित पक्राउ
न्यूज ब्यूरो, सिरहा । प्रदेश नम्बर २ को सिरहा जिल्लास्थित एक स्थानीय तहका वडाध्यक्ष नै लागु औषध सहित पक्राउ परेका छन् । सिरहाको सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष रामसोगारथ
न्यूज ब्यूरो, सिरहा । प्रदेश नम्बर २ को सिरहा जिल्लास्थित एक स्थानीय तहका वडाध्यक्ष नै लागु औषध सहित पक्राउ परेका छन् ।
सिरहाको सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष रामसोगारथ यादव लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन् ।
भारतबाट फर्किदै गर्दा माडर नाकामा चेकजांच गर्ने क्रममा प्रहरीले वडाध्यक्ष यादवको साथबाट लागुऔषध बरामद गरेको हो ।
नाइट्रोभेट १५ पिस ट्याब्लेटसहित वडाध्यक्ष यादव पक्राउ परेको सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुवास बुढाथोकीले पुष्टि गरे ।
सरकारी नम्बर प्लेटको स १ ब ९३८ नम्बरको मोटरसाइकलमा आइरहेका बेला उनको साथबाट लागुऔ’षध बरामद भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर प्रहरीले यादवमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यादव नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । पार्टी फुटेपनि उनी एमालेमै रहेको बताइएको छ ।
यसका साथै, सोमबार नै साँझ करिब ६ बजेको समयमा जिल्ला सिरहा सिरहा नगरपालिका वडा नं. १८ ईटारी स्थितमा पनि एक जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।
वडा प्रहरी कार्यालय (ख) सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले स. ४ प. ७६०८ नम्बरको मोटरसाईकल चेकजाँच गर्ने क्रममा जिल्ला सिरहा अर्नामा गाँउ पालिका वडा नम्बर ३ बस्ने बर्ष २३ को पप्पु दासको साथ बाट अबैध लागू औषध बरादम भएको हो ।
दासको साथबाट फेनारागन ईन्जेक्सन –१०० पिस, डाईजेपाम ईन्जेक्सन–१०० पिस र नोर्फीन ईन्जेक्सन १०० पिस सहित मानिस पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट थप अनुसन्धान कार्य भईरहेको जनाइएको छ ।